Kutsanangura sei mazwi muiyo iOS 14 Dudziro app | IPhone nhau
Maitiro ekutsanangura mazwi muiyo iOS 14 Dudziro app
iOS 14 yakaunza chinyowani chekushandisa kuPhones: Dudziro. Neichi chishandiso chatinowana nenzira yakapfava, inokurumidza uye inoonekwa yekuwana shanduro dzakanaka pakati pemitauro gumi nemana. Chinhu chakanaka nezve chishandiso ndechekuti inosanganisira iyo yemuno vhezheni iyo inobvumira kushandura pasina internet kubatana. Uye zvakare, sarudzo inosanganisirwa kuteerera kududziro yeshanduro yedu, sarudzo yakanaka kana tiri kunze kwenyika yedu uye tisingataure mutauro. Nekudaro, iyo Dudziro app Izvo zvakare zvinokutendera iwe kutsanangura mazwi mukati meapp nenzira yakapusa uye kuti tinokuudza pazasi.
Tsanangura mazwi mumutauro wako wekuzvarwa neApple app muIOS 14
Iyo app Dudziro yakagadzirirwa kuve iyo yakapusa, inokurumidza uye inoshanda kwazvo nzira yekushandura kutaurirana kwezwi uye mameseji pakati pemitauro yakasiyanasiyana 11. Yemunharaunda modhi inobvumidza vashandisi kushandisa izvo zveapp zvinoshandiswa kunze kwekududzira izwi ravo uye zvinyorwa zvakavanzika.
Chirongwa cheDudziro chinochengetedza mamiriro ezvinhu akawanda atinozviwana tiri kunze kwenyika yedu nemutauro watisingadzore. Uye zvakare, mukana wekurodha pasi mapakeji enzvimbo nemutauro wedu unozoona kuti tine Anwendung inoshanda kunyangwe isu tisina internet pane yedu kifaa. Asi zvakare, App yeDudziro inosanganisira duramazwi mukati maro, kuti tikwanise kutsanangura mazwi atakadudzira mumutauro wedu.
Kune izvi isu tichafanirwa kutanga taita mubvunzo. Mune kesi yangu, ndakaita shanduro kubva kuSpanish kuenda kuChirungu. Kamwe kana mutsara wakashandurwa ukaonekwa neruvara rwebhuruu, kuti uwane iyo tsananguro yemazwi akashandurwa Ini ndinofanira kungodzvanya padziri rimwe nerimwe. Kana yangodzvanywa, duramazwi rinoratidzwa uye tsananguro yeshoko rakasarudzwa ichaonekwa mumutauro wekutanga.
Dambudziko nderekuti kubiridzira uku hakuwanikwi mumamiriro ekunze. Kuti uwane iyo tsananguro mumamiriro ekunze isu tichafanirwa kusarudza izwi uye tinya pa «kubvunza». Iyo imwechete menyu inozoratidzwa nekukasira neduramazwi asi haina kukurumidza kana seyakananga senge mune mufananidzo mufananidzo. Saka Tichakwanisa kuziva zvinoreva mazwi mumutauro watakaturikira kuti tizive izwi riri mune mumwe mutauro rakafanana nerwedu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekutsanangura mazwi muiyo iOS 14 Dudziro app
Inosara ichiiswa mune sarudzo yekugovana kana mune yakasarudzika menyu pamwe nekopi kana kunama pane imwezve yekubvunza…. zvingave zvakafanira kuisa iyo kuti dudzire kuti bubble raizovhura
Riripi app rekududzira?
Chaja reGREEN USB-C 65W, chargecha ako ese majaira neiyi diki charger
Iyo iPhone 12 inogona kunge isingaenderane ne5G 700MHz, zvinorevei izvozvo?